दासढुङ्गाको एकीकृत विकासका लागि डिपिआर बन्दै - लोकसंवाद
कार्तिक ३, २०७७, सोमबार
दासढुङ्गाको एकीकृत विकासका लागि डिपिआर बन्दै
भरतपुर । सत्ताइस वर्षअघि तात्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव मदनकुमार भण्डारी र सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको रहस्यमय दुर्घटनामा मृत्यु भएको स्थल दासढुङ्गाको एकीकृत विकास गरिने भएको छ । त्यसका लागि डिपिआर निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन विभागले डिपिआर निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
परामर्शदाता कम्पनीद्वारा प्रस्तावपत्र पेश भइसकेको र आन्तरिक मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको विभागका इञ्जीनियर सचिन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँले एक महिनाभित्र डिपिआर निर्माण गर्ने कम्पनी छानोट हुने र साढे चार महिनाभित्र डिपिआर निर्माण हुने बताउनुभयो । मदन–आश्रित स्मृति पार्कसहित राजनीतिक अध्ययन केन्द्र र सङ्ग्रालयका रूपमा दासढुङ्गाको विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । ५० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको डिपिआरका लागि सांसद र प्राविधिकसहितको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । मदन–आश्रितको दुर्घटना हुँदा नेकपा (एमाले) चितवनका पार्टी प्रमुख (सचिव) रहनुभएका हालका प्रदेशसभा सदस्य विजय सुवेदीले संरचना निर्माण गर्दा प्रतिफल आउने गरी काम गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, 'मदन–आश्रितको झल्को दिने गरी संरचना निर्माण हुनेछन्, यसले उहाँहरुलाई जीवन्त राख्नेछ ।' उहाँले देश–विदेशबाट आउनेहरु जसले उहाँहरुलाई बुझ्न चाहन्छन्, त्यो सबै दासढुङ्गामा प्राप्त गर्ने बताउनुभयो । उहाँले अब दासढुङ्गाको विकासका लागि निरन्तर काम गरिने जनाउनुभयो । विसं २०५० जेठ ३ गते हालको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं २९ दासढुङ्गामा उहाँहरू चढेको जिप दुर्घटना हुँदा दुवै जनाको मृत्यु भएको थियो । दासढुङ्गामा यसअघि नै नेपाल सरकारले ३६ कठ्ठा जग्गा खरिद गरिसकेको छ । जहाँबाट रमणीय त्रिशूली नदी, देवघाटलगायत क्षेत्र देख्न सकिन्छ । थप नम्बरी ३३ कठ्ठा र ऐलानी १८० कठ्ठा खरिद गरी आवश्यक संरचना निर्माण गरिने योजना अघि बढाइएको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
सो ठाउँमा सङ्ग्रहालय, नीतिगत अनुसन्धान केन्द्र, तालिम केन्द्र, आवास भवन, कार्यालय भवन, चमेनागृहलगायत संरचनासँगै भिरालो सो क्षेत्रमा आकर्षक पार्क बनाइने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । भरतपुर–२९ का वडाध्यक्ष मानबहादुर थापाले ढासढुङ्गाको विकासका लागि वडाले निरन्तर पहल गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा यात्रा गर्ने यात्रुको ध्यान केन्द्रित गर्ने संरचना बनाउने गरी डिपिआर निर्माण गरिनेछ ।' स्थानीयस्तरबाट संरक्षणका काम भए पनि पर्याप्त हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज सफारी खुला
पर्यटन प्रवर्ध्दनात्मक कार्यक्रममा जोड दिन्छुः रेबान अध्यक्ष बराल
रुबसकाँडामा शुरु भयो नियमित प्याराग्लाइडिङ
नेकपामा गुटगत प्रतिस्पर्धा अन्ततः प्रतिशोधमा ! प्रचण्ड–माधव समूह बाइपाससँगै 'रुन्चे असन्तुष्टि'को सङ्केत !!
डेढ दर्जन बाछिटा
परिभाषा र मान्यतामा फेरिएकाे दशै‌ं : मेरो घर जानको लागि बाटै बन्द !
आर्मीनीया–अजरबैजान द्वन्द्व : गैरसैनिक र गरिब विदेशीलाई जबरजस्ती युद्धमा धकेलिदै
जोखिममा नयाँ संस्था : पेइचिङमा नेपाल खेलकुद लेखक सङ्घ स्वघोषित सभापति र महासचिव बन्दा !
विश्व बस्नेत : फिल्म क्षेत्रमा सफल, आर्थिक उपार्जनमा असफल भएकै कारण खोजी नीति नभएको नाम
विश्वमा कोभिड १९ सङक्रमितको संख्या करिब चार करोड